M Chọrọ Ịna-ekpori Ndụ. M̀ Kwesịrị Ịgwa Papa M na Mama M? | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Mere Papa M na Mama M Anaghị Ekwe M Kporie Ndụ?
Weregodị ya na ihe a na-eme ugbu a:
Ị chọrọ ịga oriri na nkwari, ma ị maghị ma papa gị na mama gị hà ga-ekwe gị gaa. Olee ihe ị ga-eme?
M GA-AGA, MA M GAGHỊ AGWA HA
M GAGHỊ AGA, M GAGHỊKWANỤ AGWA HA
M GA-AGWA HA KA M MARA IHE HA GA-EKWU
1. M GA-AGA, MA M GAGHỊ AGWA HA
Ihe nwere ike ime ka ị chọọ ime ya: Ị chọrọ ka ndị enyi gị mara na ọ bụ gịnwa na-ekpebi ihe ị na-eme. I chere na ị ma ihe karịa papa gị na mama gị. O nwekwara ike bụrụ na o nweghị ihe i ji okwu ha kpọrọ.—Ilu 14:18.
Ihe ga-eme ma i mee ya: Obi nwere ike ịtọ ndị enyi gị ụtọ, mana ihe ahụ i mere ga-emekwa ka ha mata na ị na-aghọ aghụghọ. Ebe ọ bụ na obi kara gị ịghọ papa gị na mama gị aghụghọ, i nwekwara ike ịghọ ndị enyi gị aghụghọ. Papa gị na mama gị mechaa chọpụta, ọ ga-ewute ha, o nwekwara ike ime ka ha kwụsị gị ịga ebe ndị ọzọ ị chọrọ ịga.—Ilu 12:15.
2. M GAGHỊ AGA, M GAGHỊKWANỤ AGWA HA
Ihe nwere ike ime ka ị chọọ ime ya: I chechaala ịga ebe ahụ ma cheta na ihe a na-aga ime ebe ahụ adịghị mma. Ma ọ bụkwanụ, ị chọpụtala na ụfọdụ ndị ga-abịa ya anaghị akpa àgwà ọma. (1 Ndị Kọrịnt 15:33; Ndị Filipaị 4:8) O nwekwara ike ịbụ na ị chọrọ ịga, ma obi akaghị gị ịgwa ndị mụrụ gị.
Ihe ga-eme ma i mee ya: Ọ bụrụ na ị gaghị n’ihi na ị ma na ọ dịghị mma ịga, obi ga-akakwu gị ịgwa ndị enyi gị na ị gaghị aga. Ma, ọ bụrụ na ihe mere na ị gaghị bụ na obi akaghị gị ịgwa ndị mụrụ gị, i nwere ike nọrọ n’ụlọ, obi ana-ajọ gị njọ, gị ana-eche na ọ bụ naanị gị bụ onye na-anaghị ekpori ndụ.
3. M GA-AGWA HA KA M MARA IHE HA GA-EKWU
Ihe nwere ike ime ka ị chọọ ime ya: Ị ghọtara na i kwesịrị irubere papa gị na mama gị isi, ị na-akwanyekwara ha ùgwù. (Ndị Kọlọsi 3:20) Ị hụrụ papa gị na mama gị n’anya, ị chọghịkwa ịga n’agwaghị ha n’ihi na ọ ga-ewute ha. (Ilu 10:1) I nwekwara ike ịgwa ha ebe ị chọrọ ịga na ihe mere i ji chọọ ịga.
Ihe ga-eme ma i mee ya: Papa gị na mama gị ga-ama na ị hụrụ ha n’anya, nakwa na ị na-akwanyere ha ùgwù. Ha chọpụtakwa na ebe ị chọrọ ịga adịghị njọ, ha nwere ike ikwe gị gaa.
Ihe Nwere Ike Ime Ka Papa Gị na Mama Gị Sị Gị Agala
Chebaragodị ihe atụ a echiche ka ị mata otu ihe mere ha nwere ike iji sị gị agala. Were ya na a sị gị họrọ ebe ị ga-aga gwuo mmiri, i nwere ike ịhọrọ ebe e nwere ndị na-agụpụta onye mmiri chọrọ iri. Maka gịnị? Maka na mmiri ị na-egwu tọwa gị ụtọ, ọ ga-esiri gị ike ịma mgbe mmiri chọrọ iri gị. Ma ndị ahụ na-agụpụta mmadụ na-anọ n’ebe ha ga-ahụ onye mmiri chọrọ iri. Papa gị na mama gị dị ka ndị ahụ na-agụpụta mmadụ. Ebe ọ bụ na ha ma ihe karịa gị, ha nwere ike ịhụ ihe ọjọọ chọrọ ime gị ma gịnwa ahụbeghị ya. Ha na-eme ka ndị ahụ na-agụpụta onye mmiri chọrọ iri. Ha chọrọ ka i kporie ndụ, ha chọkwara inyere gị aka ka ihe ọjọọ ghara ime gị, n’ihi na ihe ọjọọ mee gị, ị gaghị ekporizi ndụ.
Ihe ọzọ mere ha nwere ike iji sị gị agala bụ na ha achọghị ka ihe ọ bụla mee gị. Ị gwa ha ebe ị chọrọ ịga, ha nwere ike ị sị gị gaa ma ọ bụ gị agala. Ihe ha ga-eji sị gị gaa ma ọ bụ gị agala bụ n’ihi na ha hụrụ gị n’anya. Ị gwa ha ihe ị chọrọ ime, ha ga na-eche ma ò nwere ihe ọjọọ ga-eme gị ma ha kwe gị mee ya. O doo ha anya na o nweghị ihe ga-eme gị, ha ga-ekwe gị mee ihe ahụ.
Ihe Ị Ga-eme Ka Ha Kwe Gị Gaa
Gwa ha eziokwu: Jụọ onwe gị ihe mere i ji chọọ ịga ebe ahụ. Ọ̀ bụ n’ihi na ihe a ga-eme n’ebe ahụ na-atọ gị ụtọ, ka ọ̀ bụ n’ihi na ị chọrọ ime ihe ụmụaka ibe gị na-eme? Ọ̀ bụ n’ihi na nwa okorobịa ahụ ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ahụ ị na-achụ ga-abịa ebe ahụ?’ Nke ọ bụla ọ bụ, gwa papa gị na mama gị. E nwere mgbe ha hà ka gị, ha makwa gị nke ọma. N’ihi ya, ma ị gwara ha ma ị gwaghị ha, ha nwere ike ịma ihe mere i ji chọọ ịga. Obi ga-adị ha ụtọ ma ị gwa ha eziokwu. Ihe ha ga-agwa gị ga-abakwara gị uru n’ihi na ha ka gị mara ihe. (Ilu 7:1, 2) Ma ọ bụrụ na ị gwaghị ha eziokwu, ọ ga-eme ka ha ghara ịtụkwasị gị obi. O nwekwara ike ime ka ha ghara ịsị gị gawa mgbe ọ bụla ị gwara ha na o nwere ebe ị chọrọ ịga.
Mgbe ị ga-agwa ha: Arịọla papa gị na mama gị ihe mgbe ha ka si ọrụ lọta ma ọ bụ mgbe ha na-eme ihe ndị ọzọ dị ha mkpa. Rịọ ha ihe mgbe obi ruru ha ala. Ma echela ka oge ị ga-aga ebe ahụ ruo tupu gị agwa ha. Ọ bụrụ na ị gwa ha ya mgbe oge ị ga-eji gaa ruru, ị ga-esiwezi ọnwụ ka ha kwe gị gaa. Ha ga-achọ ichebara ya echiche tupu ha ekwe gị gawa. Gwa ha ya n’oge ka ha nwee ike ichebara ya echiche.
Ihe ị ga-agwa ha: Gwa ha hoo haa ihe ị chọrọ ime. Obi anaghị adị ndị nne na nna mma ma ha jụọ nwa ha ihe gbasara ebe ọ chọrọ ịga, ya asị ha, “Amaghị m.” Ọ na-akacha ewe ha iwe ma ọ bụrụ na nwa ahụ zara ha otú ahụ mgbe ha jụrụ ya, sị: “Ole ndị ga-abịa ebe ahụ?” “È nwere onye toro eto bụ́ ezigbo mmadụ ga-abịa?” ma ọ bụkwanụ “Ole mgbe unu ga-emecha?”
Otú ị ga-esi agwa ha ya: Echela na papa gị na mama gị bụ ndị iro gị. Echefula na gị na ha na-achụ otu ihe. I cheta na gị na ha na-achụ otu ihe, ị gaghị eji olu ike arịọ ha ihe. I meda obi rịọ ha ihe, ha nwere ike imere gị ihe ahụ.
Mee ihe ọ bụla ha gwara gị. Ọ ga-eme ka ha na-ele gị anya ka onye torola eto. Ọ ga-emekwa ka ha na-akwanyere gị ùgwù. Mgbe ọzọ ị gwara ha ebe ị chọrọ ịga, ha nwere ike sị gị gaa.
Ndị mụrụ gị yiri ndị na-agụpụta onye mmiri chọrọ iri. Ha nwere ike ịhụ nsogbu gịnwa na-ahụghị